A-Europe Umzila Planner Isiza Wena Zula | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > A-Europe Umzila Planner Isiza Wena Zula
A-Europe Umzila Planner ubalulekile ukuhlela yakho uhambo ngesitimela kulo lonke elaseYurophu. Okokuqala nje, kukhona phezu 10,000 izindawo angavakashela eYurophu. Ngenxa isibalo izindawo, kubalulekile basesha kanjani kumephu ikhambo lakho. Cishe ufuna ukuba umzila wakho siqu esiyingqayizivele ukuhamba yeziNguquko eYurophu. Futhi ukuze kusenesikhathi, ungase ufune agcinele amathikithi kusenesikhathi. Kuyaphawuleka kakhulu kufanele bakwazi incwadi isitimela uhambo zihlanganisa kwamakhasimende ngolimi lwakho futhi ukuvumela efana Gcina Isitimela ivumela.
Europe Umzila Planner ukuhlela Okubalulekile izici
Konke ukuhlelwa iqala ngokwenza isiqiniseko sokuthi unayo yokuhamba ezidingekayo. Ngokufanayo, ngaphambi uhlela uhambo lwakho, ungase uthande ukucabangela flying eya endaweni yokuqala uma uhlala ngaphandle Europe nesitimela wokujikeleza uma uhlala ngaphakathi Europe ngoba yileyo ndlela engcono travel eYurophu. Ezinye izici abonakala kubalulekile abahambi zamanje yilezi; mlando amasayithi, uhlobo, nightlife, amabhishi, ukudla, nemisebenzi.
Europe Umzila Planner ngezwe
Okokuqala, ukubhuka zidingeka izitimela ebusuku nezitimela ngamazwe futhi ungakwazi ukukwenza Gcina Isitimela. Ukubhuka zingenzeka nezalo kwamadolobha izitimela ngesivinini (kufaka EuroCity futhi phakathi kwamadolobha). Imizila emikhulu yamadolobha aseVienna & Linz, Salzburg, Graz & the eCarinthia wesifunda. Austria Umzila Europe Planner inikeza ezinhle kakhulu zamazwe omhlaba isitimela ukuxhumana. Ngaphezu kwalokho, iziphuzo kanye Ungadla etholakalayo ezitimeleni kakhulu nezinketho yokudlela etholakalayo ku izitimela ngamazwe. Ungakwazi ukuletha emabhayisikili ezitimeleni Austria. Une futhi amathikithi for Austria elikuvumela ukuqeqesha zokuhambela Lichtenstein.
izitimela kakhulu e Belgium zidinga ukubhuka, ngakho akukungakanani entsha yase-Europe Umzila wethu Planner lapha. It is kakhulu Kunconywa ikakhulukazi ukuthi izitimela esikhumulweni sezindiza, izitimela ngamazwe, nezitimela ngesivinini kuzodingeka ukubhuka isikhathi esanele kusengaphambili. Ngaphezu kwalokho, izitimela eBelgium babe 1 no 2 ikilasi zihlalo. Ezinye izitimela anikele ibha mini Ungadla ashisayo nabandayo. izikhathi Journey ngaphakathi Belgium kuyashesha nge amabanga ohambo phakathi, emadolobheni amakhulu ukuthatha 20 imizuzu ihora.
Ngokufanayo eBelgium Europe Umzila Planner, awudingi ukwenza ukubhuka kwezitimela eziningi eBosnia. Akunakwenzeka ukwenza ukubhuka kwe- izitimela yasekhaya eBosnia. Lokhu kuhlanganisa Brzi Voz izitimela fast and
umgibeli wendawo izitimela. Ngokungafani namanye amazwe aseYurophu, emabhayisikili awavunyelwe ezitimeleni eBosnia. Ngaphezu kwalokho, uxhumano ngezizwe Bosnia zidlule Sarajevo esiteshini.
Europe Umzila Planner for Bulgaria
Awudingi okuningi kwe-Europe Route Planner ngokubhuka kweBarz Vlak yendawo 'ngokushesha’ izitimela futhi Patnicheski izitimela wendawo. Nokho, ukubhuka ayadingeka Expresen Vlak izitimela fast and izitimela ngamazwe. izitimela International etholakala Bulgaria zihlanganisa Bulgaria Express, I Black Sea Izincwajana zemininingwane, I Bucharest Istanbul Express ngokufanayo ezinye izitimela ushiya kusukela Sofia. imizila main Bulgaria sika ukuthatha 6-8 amahora (izitimela ngobusuku obubodwa zingenzeka) Sofia kuyinto, kunjalo, esiteshini esiyinhloko uxhumano ngamazwe. Amabhayisikili avunyelwe ezitimeleni Nokho uzodinga ukukhokhela owengeziwe kubo.
Europe Umzila Planner nge Gcina a zemininingwane
Ngoba kukhona kwesigidi izizathu udabula Europe, sithole wena amathikithi eshibhe. IYurophu inenye futhi kakhulu zezitimela amahle. Nakuba futhi kokuba nezindawo ezinhle kunazo, kufaka amabhuloho namabhishi. Ngakho ngemva ukuphatha izwe uvakasha e-Europe Umzila Planner, Thatha 3 imizuzu manje ukubhuka amathikithi esitimela ezishibhile eYurophu ku Londoloza zemininingwane. Khokha usebenzisa zonke izindlela zokukhokha ethandwa.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-route-planner-trains%2F%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi
#i-bosnia #bulgaria longtrainjourneys Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi travelaustria imvuenline